UMGANGATHO WEMARBLE (IINGCAMANGO EZINTLE ZOYILO) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Umgangatho weMarble (Iingcamango ezintle zoYilo)
Wamkelekile kwisikhokelo sakho sokuyila kumgangatho wemabula. Uya kufumana izimvo zoyilo, iingcebiso, amaqhinga okhuseleko kunye nezibakala ezimbalwa zokuzonwabisa! Ukufunda yonke into oyifunayo malunga nemabhile akuzange kube lula kangako! IMarble lilitye le-metamorphic kwaye linokuthatha indawo yeemilo ezininzi kunye namagama. Enye yezona zinto zisetyenziswayo kakhulu kukwakha i-marble, esetyenziselwa ukwenza ii-countertops, i-backsplashes, iziqithi kunye neepansi. Nantoni na esetyenzisiweyo kuyilo lwangaphakathi kwikhaya elinemabhile, ngakumbi i-flooring iya kwenziwa ngemabhile yokwakha.
Umahluko phakathi kwemarble yokwakha, ezinye iintlobo zemabhile kunye nelitye uqobo lwayo kukwenziwa. Imarble yokwakha yenziwe ngecalcite kunye nedolomite, okanye inyoka. Ngoku apha umntu unokuzibuza ukuba kutheni le nto ibalulekile, imarble yimarble, kodwa ukuqiqa ngolu hlobo lweemabhile yeyona nto ilungele i-aesthetics.
Ukubandakanya ezi zimbiwa kuthetha ukuba inokupholishwa, ukuze umninikhaya afumane indawo ethe tyaba, ebengezelayo eyenza ikhaya likhwaze ngobuhle.
Ngokwesiqhelo, imarble inxulunyaniswa nobutyebi, ubutyebi, kunye nokunethezeka njengoko yayiqhele ukusetyenziswa kwizigodlo nakwimisebenzi ebiza kakhulu yokwakha. Oku kwenziwa ngokuyinxalenye kukukhanya okuqaqambileyo okubengezelayo akunikayo xa kupolishiwe. Ke ngoko i-marble flooring ngokuqinisekileyo inokuzisa i-pizzazz kulo naliphi na igumbi lesitayile.
Umgangatho weMarble Tile
Iindidi zoMgangatho weMarble zigqiba
Iipateni zoMgangatho weMarble
Iindleko zeMarble Flooring
Ukutywina uMgangatho weMarble
Umgangatho weMarble njengoko konke ukusetyenziswa kwemabhile kunenzuzo kunye nokubi. Ukuphinda phinda Imiphezulu yeetafile zemabhile i-flooring inokuza imibala emininzi, kubandakanya iziqwenga zemibala. Kuba zililitye lendalo, zonke zahlukile, akukho siqwenga sifana ngokulandelayo.
Nokuba loo pro okanye ikhonkco ixhomekeke ngokupheleleyo kwimeko. Umgangatho weMarble uza kufumana olu hlobo lokukhanya kuyo yiyo loo nto isetyenziswa rhoqo kwimifanekiso eqingqiweyo.
Ngelishwa, njengoko bekutshiwo ngaphambili, i-marble iyakwazi ukubala kunye nokukhuhla. Into ebaluleke kakhulu ekufuneka ucinge ngayo kukuba imarble ebengezelelweyo inokuba yindawo emtyibilizi, ngakumbi xa amanzi achithakeleyo kunye neencindi zekhitshi zijikeleza. Musa ukukhathazeka nangona oku kunokucinywa ngeerugs kunye neemethi.
Ulondolozo yinto ekufuneka uyithathele ingqalelo, ukutywina i-marble kubalulekile ukulwa nokukrwela kunye nokubala. Iindawo ezisetyenziswa kakhulu njenge Iishawa zemabhile kuya kufuna ukutywinwa rhoqo ukuqinisekisa ubuhle babo obungapheliyo.
Lo ngumsebenzi oza kudinga ukugqitywa rhoqo kwiinyanga ezintandathu ukuya kwezilishumi elinambini ukugcina ukukhanya kunye nokukhuselwa. Kuyacetyiswa ukuba kuqeshwe ingcali ukuze ikhathalele imarble yakho kwaye igcine ikhangeleka intle. Ixabiso lokuhlawulela ubuhle bendalo bemabhile.
Xa kuziwa ekukhetheni izixhobo zophahla ngokubanzi konke kukhetho, ukhetho, ukhetho. Ukunciphisa ukhetho kumgangatho wemabula yayikukuthatha izigqibo ngokwaneleyo, ngoku kukho ukhetho oluninzi!
Kukho ngokoqobo amakhulu eentlobo zeemabhile nganye inempawu kunye nokubonakala kwayo okungafaniyo. Ngethamsanqa xa kufikwa kwimabhile kukho iintlobo ezintathu ezisetyenziswa ngokuxhaphakileyo ezikhethwa ukujongwa phantsi.
Oku kubandakanya uCarrara, uCalacatta kunye noBreccia. Oku akuthethi ukuba ezi zezona zikhetho, kodwa xa ujonga iindlela zokunciphisa ezi zinto zintathu yindawo elungileyo ukuqala.
ICarrara- ICarrara isuntswana lemarble yeklasikhi emhlophe kakhulu enemabhile emhlophe enemigca emincinci engwevu.
ICalacatta- ICalacatta yenye yezona zinto zibiza kakhulu umntu anokuzifumana. Kungenxa yokuba ihlala isebenzisa abamhlophe abacocekileyo abanemigca ephilayo. Kuyaziwa ngokungena kwiiofisi kunye namakhaya okunethezeka apho umntu angenza umboniso wokuqala.
IBreccia- iBreccia lilitye elinamaqhekeza e-angular adityaniswe kunye. Le yinxalenye enkulu yesibheno sayo, siyinika igrabile evulekileyo okanye imbonakalo ye-veiny ngokuxhomekeke kukhethiweyo. Oku kuhlala kumnyama, imibala yendalo ngakumbi.
Iithayile zemarble zomgangatho lukhetho oluhle lomgangatho kunye nomtsalane ongunaphakade, ngokuthandwa kakhulu. Ngale nto kukho izinto ezimbalwa ekufuneka zaziwe ngaphambi kokuba zikhethelwe nayiphi na ikhitshi.
Iinkonzo - Umgangatho weMarble uyamangalisa, bayakhwaza beklasi kunye nobunkunkqele. Ngokwembali emarmore yayiluphawu lobutyebi kunye nokunethezeka, kwaye yayihlala isetyenziswa zizindlu zasebukhosini nakwizakhiwo zokwakha ezibizayo.
IMarble ifumaneka kuluhlu lwemibala kunye nemibala. Njengoko kuchaziwe kamva, izinto onokuthi uzenze ngemarble azinakuphela kwaye oku kwenziwa ngokwazi kwayo ukuxuba kunye nokuhambelana nemibala elityeni.
Ubuhle buphuculwa kuphela kukungaguquguquki kwayo, ukuvumela ukukhanya ukwenza ukuba imigangatho ikhanye ngokuqinisekileyo. Oku kwenza ukuba ibhastile lahluke ngokukodwa kunye nenyaniso yokuba, ngenxa yokuba lilitye lendalo, akukho siqwenga sifana ncam. Ukongeza kwinkangeleko yemarble, ikwalilitye elishinyeneyo elinokuthatha ukugcwala kwabantu. Oku kuyakwenza ukhetho oluhle kakhulu kwikhitshi eliphezulu lezithuthi.
Bendlela -Ngelishwa ngalo lonke uluhlu lwenkqubo kufuneka kubekho uluhlu oludibeneyo. IMarble lilitye lendalo kwaye ngelixa lizisa ubuhle kunye neempawu ezizodwa ezikwanayo ezinokukwazi ukukrwela, amabala kwaye zinokutyibilika xa usebenzisa iiarhente ukulwa naloo nto.
Ukuchola ukugqitywa komgangatho kubaluleke kakhulu kuba lilitye lendalo. Ngenxa yeengozi ezichazwe ngaphambili ekukhetheni i-marble ephosiweyo okanye ehloniphekileyo inokudlala indima enkulu kwezo zinto.
ngubani omele ukuhlawula umtshato
Ikhazimlisiwe Imabhile emenyezelisiweyo yimarble ebengezelayo, ebengezelayo, eqaqambileyo oyibona ikhanya kumangeniso abiza kakhulu kwimagazini yoyilo lwangaphakathi.
Ngelixa oku kujongeka kukuhle kunokubangela ukuba umgangatho ube mtyibilizi ingakumbi xa umanzi, ke zilungiselele ukufumana umqondiso okanye iiragi ezithile zokulwa.
I-Honed-I-marble ehloniphekileyo isatywinelwe ukhuseleko lwelitye elihle lendalo kodwa inani elincinci lingaphantsi. Oku kunokubangela ukutyibilika kancinane emngciphekweni.
Emva kokuthatha isigqibo malunga nezinto kunye nokugqitywa kweprojekthi, ngoku lixesha lokukhetha iipateni. Kukho ukhetho olwahlukileyo xa usenza isigqibo kwaye kulapho kulungelelaniswa khona. Olunye ukhetho lunokuba ngumtya wesherring, isitena, rhoqo, ukuphindaphinda, imida, izinto ezibonakalayo, ii-mosaic, iimallion, okanye ukukhanya kwamehlo!
Rhoqo - Njengoko igama libonisa ukuba le yeyona patheni isisiseko enokusetyenziselwa kumgangatho. Oku kwenziwa ngokusebenzisa iziqwenga ezinkulu zemabhile ezibekwe nkqo. Le ndlela iya kudala imvakalelo evulekileyo ngakumbi, esetyenziswa ngokuxhaphakileyo xa isithuba sixakekile kwaye singafuni ukusixinanisa ngononophelo ngakumbi.
Ukuphindaphinda -Umzekelo ophindayo unokuba uyile okanye usisiseko njengoko umnqweno unqwenela. Oku kunokwenziwa ngokubeka iithayile ezahlukeneyo zonke ezinye iziqwenga, okanye zonke iziqwenga ezibini, nokuba zontathu iziqwenga! Ekuphela kwemfuneko kukuba, njengoko igama libonisa, iphinde.
IHringbone Ipateni yeHeringbone yenzelwe ukuba ifane namathambo entlanzi, umzekelo umngxuma, iphinde ibhekise ngqo kwigama (abayili bazamile ukuyigcina ilula xa kusenziwa amagama!).
Oku kwenziwa ngokusebenzisa iziqwenga zethayile ezixande, zihlala zinomlinganiso we-2: 1 okanye 3: 1. Oku kunokwenziwa ngeendlela ezininzi, nokuba zonke zinemibala emhlophe emhlophe okanye ukutshintsha phakathi kwemiqolo.
Imida -Umda umda yinto enokwenziwa ukongeza nakwezinye iipateni, konke okudingayo kukongeza imilo eyahlukileyo okanye umbala wombala wethayile ejikeleze umphandle wepateni.
Oku kunokwenziwa nakwimida yezinto ezingqonge i-flooring, kubandakanya kodwa kungaphelelanga apho: kwiikholamu, kwisiqithi, kwikhabhathi, njl.njl.
Ekhethekileyo -Ukuba umyili uyicinge, inokwenzeka. Ukusuka kwii-medallion ezibiyelwe ekungeneni ukuya kwimibala kwiipaseji umhlaba uvulelekile kwimida emitsha yoyilo.
Kukho nabaqulunqi ababeka ixesha elininzi kunye nomzamo emsebenzini wabo onokwenza i-3-D njengamaqhekeza anokusebenza kwiindawo ezinkulu.
Ixabiso lemarble liya kutshintsha kunye nomgangatho wemabhile, njengayo nayiphi na into. I-tile yemarble eyisiseko ingaqala ngezantsi njenge- $ 5 ngeenyawo zenyawo.
Ukuhla ukuya kwinqanaba eliphezulu leemabula zangaphantsi kunokuphinda kabini kwixabiso ukuqala malunga ne- $ 10 ngeenyawo zenyawo. Ukuba imali ayisiyonto, okanye iprojekthi ifuna iindleko ezikhethekileyo zemarble inokutsiba kwi $ 40 kwibhola yenyawo nganye.
Izinto ezininzi zinokubangela ukuba ukunyuka kwamaxabiso kubandakanya inqanaba, ubungakanani, imilo, ubukhulu kunye nokugqiba.
IBakala - Ngokusekwe kukungangqinelani okungakanani, ukomelela, ukufakwa, kunye nomthamo okubandakanyiweyo kwimarble kunokubonisa inqanaba kwaye isiqwenga ngasinye sinamaxabiso ngamanqanaba A, B, C okanye D. IBakala A lelona libalaseleyo ngeyona veining iphantsi , kwaye zimbalwa iziphene.
Ubukhulu kunye neMilo -Marble ngokwesiqhelo iya kuza ngobukhulu obuthile ngumenzi (umz: 12 x 12 okanye 12 x 18). Ukongeza izinto ezinje ngeekona ezi-beveled, ubungakanani obukhethekileyo okanye ubungakanani obukhulu ngokungaqhelekanga bunokubiza ixabiso eliphezulu.
Ukutyeba I-Marble ivela ngobukhulu be-¼ ukuya ku-¾, ukujiya kuyabiza. Umvelisi usebenzisa i-marble engakumbi ke kufuneka ahlawulise ngaphezulu ngokusekwe kubukhulu, kodwa eyongeza ukomelela ngakumbi kunye nenkxaso kumgangatho.
Gqiba Imabhile emenyezelisiweyo okanye ehloniphekileyo iya kubiza amaxabiso ahlukeneyo, ngesiqhelo ipolishiwe ikwicala eliphezulu. Gcina ukhumbula ngakumbi ipolishi, islipperier somgangatho uba.
Ukongeza ekuthengeni isiqwenga semabhile uqobo lwayo kuza neminye imisebenzi efuna imali ephoswe kuyo. Umzekelo, ufakelo. Ngokwesiqhelo amaxabiso anokuvela kwi- $ 3- $ 7 kwisikwere ngasinye kufakelo.
Izinto zinokulisebenzisa elo xabiso, njengephethini ekufuneka igqityiwe, ukuba kukufakwa ngokuthe tyaba, nkqo okanye idiagonal, njl. Oku kubandakanya i-mosaic, i-motifs, kunye nemida, konke kuya kubiza kakhulu ngomceli mngeni kumfakeli.
Kwakhona ukugcina engqondweni, umgangatho wangaphambili kuya kufuneka ususwe kunye nolungiso / ulungiso lomgangatho osezantsi okhoyo. Xa uqesha iikontraki, qiniseka ukuba uyazi ukuba zeziphi iinkonzo ozenzayo okanye ongazihlawuliyo ukunqanda ukubhideka.
Esinye isigqibo esikhulu ekufuneka senziwe emva kokukhetha i-marble kukuba ingaba ipolishiwe okanye i-marble. Ukufumana i-marble ephosiweyo kuya kunika indawo ebonakalayo ebonakalayo egudileyo kunye egudileyo.
Ukunyaniseka kwelinye icala kuncinci kwaye kukhanya kancinci. Kwaye kunokubakho ngakumbi ekuthambiseni.
Ingcinga yokuqala kukuba kutheni umntu enokuthi akhethe imbeko kodwa kukho izibonelelo ezithile kwimarble marble. I-marble ehloniphekileyo ayikrwabi ngokulula njengokucoca.
Xa ukhetha i-honed okanye ipolishiwe kuya kuba kuhle ukuthatha ingqalelo apho uza kubeka khona i-marble.
Ukutywinwa kwemarble kuyimfuneko, kwaye ayoyikisi umsebenzi, kodwa yinto engekhoyo kunye nomsebenzi owenziweyo. Emva kofakelo kuyinto elungileyo ukutywina imabhile rhoqo emva kweenyanga ezilishumi elinambini kuxhomekeke kumanqanaba okusetyenziswa usebenzisa imveliso engatyaliyo ye-pH yokuphefumla.
Ukuba ukutywina i-marble yiprojekti ye-DIY ekhaya iyafana nomsebenzi wokupeyinta iindonga okanye ukonakalisa umbala. Umahluko kuphela apha yimveliso ethengiweyo, kule meko ngotywino.
Ngaphambi kokufaka isicelo se sealer qiniseka ukuba uyitshize ngokucokisekileyo indawo usebenzisa isicoci se-pH esingathathi hlangothi okanye isicocisi samatye. Nje ukuba ufafaze uya kufuna ukosula iithayile zemabhile ngelaphu elifumileyo ukuyicoca kwaye usebenzise ilaphu elomileyo ukomisa loo ndawo kakuhle.
Ukusuka apho uyakufuna ukufaka umaleko olungileyo wokutywina uqiniseke ukuba umanzi ilitye. Vumela ukutywina kutyibilike imizuzu eli-15 emva koko uyikhuphe ngelaphu elomileyo. Vumela ilitye lome ngokupheleleyo iyure e-1.
Emva kweyure e-1 phinda inkqubo kunye nokusetyenziswa kwengubo yesibini yokutywina. Emva kobuninzi bemizuzu eli-15 sula isitywina. Qiniseka ukuba ungahambi kumgangatho wemabhile ubuncinci imizuzu engama-40 emva kokufaka isitywina.
Bona Okuninzi Imibono yethayile yangasese yangasese Apha.
ithini ibhayibhile ngobudlelwane
Izipho zamaphepha ezikhumbuzo zonyaka omnye
Ngubani ingoma ka brenda etshatile
UDavids intombazana yeentyatyambo yomtshato
Ixabiso lomndilili lomtshato kwi-nj